“म भन्दा बढी मद्दत गर्नुभएको 2,700 सीपीए उम्मेदवार आफ्नो पहिलो प्रयास मा परीक्षा पास।”
– Bryce Welker, सीपीए
कसरी तपाईंको पहिलो प्रयास गर्नुहोस् मा भएको सीपीए परीक्षा पार गर्न!
(जस्तै म के)
1. तपाईंको राज्य लागि सीपीए आवश्यकताहरु फेला
सुरू गर्न, यो तपाईं सीपीए परीक्षा लागि बस्न पाउनुपर्ने हेर्न महत्त्वपूर्ण. जाँच आफ्नो राज्य सीपीए आवश्यकताहरू to learn what you need before you can take the test.
2. को सीपीए परीक्षा लागि दर्ता
एक पटक तपाईं पक्का गर्नुभयो तपाईं परीक्षण को लागि बस्न सक्छ, यो तपाईं को लागि समय दर्ता गर्ने सीपीए परीक्षा लागि.
3. सर्वश्रेष्ठ सीपीए समीक्षा कोर्स लागि पाउन तपाईंलाई
Roger CPA Review is my top pick for 2018. उद्योग सबैभन्दा आकर्षक लेक्चर संग, यो कुनै आश्चर्य धेरै विद्यार्थी मगनी रहन र सीपीए परीक्षा पास गर्न requisite जानकारी सिक्न छ.
हाम्रो पूर्ण समीक्षा हेर्नुहोस् रोजर सीपीए यहाँ समीक्षा.
विले CPAexcel एकदम केहि समय को लागि उद्योग मा सबै भन्दा विश्वसनीय नाम को एक भएको छ. एक विशाल प्रश्न बैंक र एक सहज ड्यासबोर्डमा धन्यवाद, विले गरेको सीपीए बन्ने मार्ग के धेरै परीक्षा उम्मेदवार पारित गर्न प्रयोग छ.
हाम्रो पूर्ण समीक्षा हेर्नुहोस् विले यहाँ CPAexcel.
Surgent बजार मा सबै भन्दा राम्रो सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम को एक प्रदान गर्दछ. उद्योग सबैभन्दा अनुभव प्रशिक्षकहरु धन्यवाद, ठूलो अनुकूली प्रविधि, र अनुपम समर्थन र कोचिंग, Surgent सीपीए समीक्षा वरिपरि परीक्षा पहिलो पटक पारित लागि एक महान उपकरण छ.
हाम्रो पूर्ण समीक्षा हेर्नुहोस् Surgent सीपीए समीक्षा यहाँ.
तपाईं उत्सुक हुनुहुन्छ भने पक्कै जो बारेमा लागि सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ, जानुहोस् हाम्रो सबै भन्दा राम्रो सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम तुलना पृष्ठ.
Yaeger सीपीए समीक्षा – बेकर सीपीए समीक्षा – छिटो अगाडि एकेडेमी – CPAexcel बनाम. बेकर – CPAexcel बनाम. Gleim
5. अनन्य सीपीए प्रोमो कोड संग ठूलो सुरक्षित & छूट
शीर्ष सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम कुनै पनि लागि पूर्ण मूल्य तिर्न छैन! हामी संकलित गरेको सबै भन्दा राम्रो सीपीए प्रोमो कोड र सबै शीर्ष मूल्याङ्कन सीपीए परीक्षा बन्ने तल कम्पनीहरु देखि कुपन तपाईं पैसा बचत गर्न सहयोग गर्न.
प्राप्त सबै भन्दा राम्रो सीपीए छूट यहाँ:
6. तपाईंको सीपीए अध्ययन तालिका योजना
जब तपाईं सीपीए परीक्षा लागि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईं पारित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कि पहिलो खण्ड चयन गर्न कठिन हुन जाँदै गर्नुपर्छ. त्यसैले, तपाईं पहिलो मुश्किल भाग लिइरहेको गर्न प्रतिबद्ध अघि, शायद तिमी बताउँछ मेरो लेख मा एक नजर जो सीपीए खण्ड पहिलो लिन. म सबै कवर के तपाईंले कहिल्यै पुरा प्रक्रियाको बारेमा जान्न चाहन्छु छौँ, मा प्रमाणीकरण गर्न कलेज मेरो सीपीए अध्ययन पुस्तिका.
को सीपीए दबाउन स्वागत!
म एक औसत लेखापाल को सीपीए परीक्षा पहिलो पटक वरिपरि पारित गर्न सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण छु. म मेरो कथा साझेदारी गर्न नाश र तपाईंलाई आफ्नो सीपीए यात्रा को लागि सबै भन्दा राम्रो अध्ययन सामाग्री फेला पार्न मद्दत सुरु. म मेरो अनुभव सिक्न चाहनुहुन्छ, म गरेको गल्ती जोगिन, र चयन तपाईंको सिक्ने शैली लागि सही सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम.
तपाईं सीपीए परीक्षा पास गर्न आफ्नो सामाजिक जीवन को छुटकारा वा आफ्नो प्राण बेच्न प्राप्त छैन. म गर्न सक्षम थियो आधा मेरो समग्र सीपीए बन्ने समय कटौती व्यर्थका अध्ययन विधि मलाई सिक्न मदत कि सामाग्री हटाइ र सोचिरहनुभएको द्वारा. त्यसैले, का सही ट्रयाकमा तपाईं प्राप्त र अर्को आफ्नो नाम नजिक भनेर सीपीए पद तिर लागौं.
मलाई तपाईं सीपीए परीक्षा पार गर्न सहयोग गरौं!
तुलना उत्तम सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम
कसरी तपाईंको पहिलो प्रयास गर्नुहोस् मा परीक्षा पार गर्न सिक्न
सीपीए छूट र प्रोमो कोड प्राप्त
को सीपीए परीक्षा पास दर छ बस 49%
सीपीए उम्मेदवारको बहुमत राम्ररी योजना गर्न ज्ञान र स्रोतहरू कमी किनभने पारित गर्न नहुनु त कम छन्, अध्ययन, र प्राथमिकता.
नाश यहाँ निश्चित छ तपाईं सबै कुरा संग सुसज्जित छन् भनेर मार्फत आफ्नो पहिलो समय सीपीए परीक्षा को सबै चार खण्डहरू पारित गर्न आवश्यक. सुरू गरौं!
मानिसहरू के भनिरहेका छन् हेर्नुहोस्
"Bryce जो सीपीए कोर्स सबैभन्दा लाभदायक हुनेछ निर्णय धेरै ज्ञान र उपयोगी थियो. उहाँले पनि धेरै प्रभावकारी उपयोगी आशय र मेरो अध्ययन गर्ने बानी बनाउन सुझाव मलाई दिनुभयो। "
माइल Penava (सीपीए उम्मेदवार)
"नाश भएको सीपीए म एक ठाउँमा मेरो सीपीए साहसिक सुरु गर्न आवश्यक सबै जानकारी थियो. अध्ययन सुझावहरू Bryce लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईं साँच्चै आफ्नो सामान थाहा! म अब सीपीए परीक्षा दबाउन जाँदै छु!"
जनवरी गोंजालेज (सीपीए उम्मेदवार)
“The study tips that Bryce provides have made my CPA exam experience much less stressful and helped me pass my first two sections already. म पक्कै यो सीपीए परीक्षा दबाउन जाँदै छु!"
लरेन (सीपीए उम्मेदवार)
सबै भन्दा साधारण प्रश्न को सीपीए बारे
म किन सीपीए बन्न गर्नुपर्छ?
को एक सीपीए हुनुको लाभ मूर्त र intangible दुवै हो. तपाईँको नाम अर्को भन्ने पद संग, तपाईं एक राम्रो क्यारियर trajectory प्राप्त, एक उच्च वेतन, त्यस्तै मान्यता प्राप्त साथीहरूको आदर, र कुना कार्यालय स्थितिहरू सुरक्षित सम्भावित. आफ्नो करियर को पाठ्यक्रम भन्दा, CPAs बनाउन $1 गैर-प्रमाणित समकक्षों भन्दा लाख. The C-Suite is more likely to be made up of people who are CPAs than those who lack the title—executive search firm Spencer Stuart noted roughly 45 CFOs प्रतिशत एक सीपीए छ.
राज्य द्वारा सीपीए परीक्षा आवश्यकताहरू के हुन्?
को को सीपीए परीक्षा लागि बस्न आवश्यकताहरू राज्य गर्न राज्य बाट विशेष गरी अंतर रहन्थ्यो छैन, तर त्यहाँ पक्कै पनि केही outliers छन्. बुझ्न यी सीपीए परीक्षा आवश्यकताहरु आवश्यक छ, तथापि, एक सीपीए बन्ने पहिलो चरण परीक्षा लागि बस्न सक्षम रहेको छ रूपमा. सबैभन्दा भाग लागि, तपाईं आवश्यक जाँदै हुनुहुन्छ 150 लेखा शिक्षा क्रेडिट घण्टा, केही कार्य अनुभव संग. त्यहाँ बस भन्दा आवश्यकताहरु निश्चित थप छ 150 क्रेडिट घण्टा, तर तपाईं परीक्षा लागि बस्न आधारभूत शैक्षिक जग रूपमा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ.
म सीपीए परीक्षा लागि कसरी लागू गर्न?
को सीपीए परीक्षा लागि आवेदन एक जटिल प्रक्रिया हो, विशेष गरी मिति प्रतिबन्ध र धेरै आवश्यकताहरू दिइएको. कसरी लागू गर्न समझ निर्धारण र समय व्यवस्थापन मद्दत गर्नेछ, पक्का आधारमा सबै कवर त बनाउन. आधारभूत आवेदन प्रक्रिया स्कूल प्रतिलिपिहरु समावेश, शुल्क र आवेदन पेश, आफ्नो राज्य बोर्ड देखि ATT प्राप्त, getting your NTS from NASBA, को Prometric वेबसाइटमा जा परीक्षा मिति तालिका, त्यसपछि बल्ल अध्ययन र परीक्षण लिइरहेको. को सीपीए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया धेरै विशिष्ट छ र भ्रामक हुन सक्छ, त्यसैले बनाउन तपाईं एक टी गर्न ठीक हरेक विवरण पालना निश्चित.
कसरी सीपीए परीक्षा खण्ड असफल पछि मान्छे उत्प्रेरणा रहन के?
प्रेरणा फेला एउटा असफल परीक्षण पछि अध्ययन संग मा पूरा गर्न धेरै मान्छे को लागि हृदयविदारक छ. तथापि, तपाईं एक मूर्त लक्ष्य सुरुङ वा घटना को अन्त्यमा उखानमा प्रकाश बनाउन सक्छ भने, यो भन्दा बढी सुरु प्रक्रिया सुख हुनेछ. धेरै मानिसहरू कम्तिमा एक खण्ड असफल, त्यसैले यसलाई किन परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई थाहा अध्ययन राख्न पक्कै सम्भव छ. एक खण्ड असफल पनि बाहिर कटौती हुनुहुन्न जसले भाग्य को कुना कार्यालय कब्जा एक सीपीए-धेरै मानिसहरू बन्न होइन 500 कम्पनीहरु आफ्नो परीक्षा को एक खण्ड असफल. असफल सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कुरा तपाईं नै गल्ती दुई पटक बनाउन छैन निश्चित गर्न छ.
म मेरो "सिक्ने शैली" कसरी चिन्नुहुन्न?
आफ्नो पहिचान सिक्ने शैली आफ्नो अध्ययन समय बन्द घन्टा र घण्टा काटन गर्न प्रमुख छ. एक पटक तपाईं के बन्ने उपकरण-भिडियो विशिष्ट प्रकार सन्दर्भमा काम गर्दछ थाहा, अडियो सामग्री, वा परीक्षण बैंकहरू वा मार्फत गरेर अभ्यास किताबहरु-सारा प्रक्रिया सजिलो हुन्छ र अध्ययन को प्रत्येक मिनेट थप मूल्यवान हुन्छ. तपाईंको सिक्ने शैली के हो तपाईं सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईं माथि पोस्ट जाँच र प्रक्रिया र जानकारी उपभोग ठ्याक्कै कसरी निर्धारण सुझाव. तपाईं मूलतः पैसा जल एक सीपीए समीक्षा पाठ्यक्रम लगानी गर्नु अघि तपाईंले राम्रो सिक्न कसरी थाह छैन!
को सीपीए परीक्षा लागि विभिन्न परीक्षण Windows के हुन्?
परीक्षण सबै व्यवसाय भर भएको त्रैमासिक वित्तीय तालिका मा टूटा छ. त्यसैले, पहिलो क्वाटरमा लागि, तपाईं दोश्रो महिना मा पहिलो दुई महिना र थप दस दिन भित्र परीक्षण लिन प्राप्त. यो एक पटक परीक्षण विन्डो समाप्त भयो, को अनुसूची बस भनेर ढाँचा दोहोरिदैन. मूलतः, त्यहाँ प्रति चौथाई एक 20-इश दिन अवधि तपाईं परीक्षण लिन सक्दैन जो छ. तपाईं आफ्नो अध्ययन योजना र सही आफ्नो परीक्षा तालिका सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं लगभग एक वर्षमा सीपीए बाहिर दस्तक गर्न सक्षम!
म एक अध्ययन तालिका कसरी सिर्जना?
एक सीपीए परीक्षा सिर्जना अध्ययन तालिका के तपाईं प्रति हप्ता समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ घण्टा कति को इमानदार मूल्यांकन बनाउन मा भरोसा गर्न वाला छ. तपाईं पूर्ण-समय काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रति दिन एक निश्चित रकम अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ, यस सप्ताह मा केहि अब सत्र संग. यदि तपाईं काम गरिरहनु भएको छैन, तपाईं प्रति समय को ठूलो chunks समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ दिन-प्रमुख अध्ययन को एक लगातार स्तर राख्न छ, तपाईं अर्को मा एक दिन र कुनै पनि धेरै गर्न चाहनुहुन्छ रूपमा. पासिङ बीच फरक हुनेछ सीपीए परीक्षा लागि अध्ययन गर्न कसरी जान्नु र प्रत्येक व्यक्ति खण्ड असफल.
जो सीपीए परीक्षा को खण्ड म पहिलो लिनुपर्छ?
आफ्नो पहिलो सीपीए परीक्षा खण्ड तपाईं पारित बारेमा सबैभन्दा विश्वस्त महसुस भन्ने एक हुनुपर्छ. पत्ता लगाउन किन तल बाहिर भिडियो जाँच!